InPowered: Na-akwado Nkwado Ntụkwasị Obi Nke Atọ | Martech Zone
Tuzdee, Machị 4, 2014 Tuesday, February 25, 2014 Douglas Karr
Dika ndi ahia ahia na ede ihe nke ha na saiti ha, odi nkpa. O doro anya na ị ga-akwalite akara, ngwaahịa na ọrụ gị kacha mma. N'aka nke ọzọ, mgbe saịtị ndị ọzọ tụkwasịrị obi na-ede banyere gi ika, ngwaahịa na ọrụ - a na-atụkwasị obi ọdịnaya ahụ ebe ọ bụ na onye edemede enweghị mmasị ego na ụlọ ọrụ (na-atụ anya). Onye edemede ahụ na-ede ọdịnaya ahụ dị ka nyocha eziokwu na itinye aha ha na akara.
Ọtụtụ afọ gara aga, ezigbo enyi m gwara m otu aghụghọ na mbọ ahịa ha na-akwụ ụgwọ. Ha akwaliteghi onwe ha ọdịnaya, ha kwalitere nnukwu edemede na nyocha sitere na saịtị ndị ọzọ gbasara ha n'ihi na ọ gbanwere nke ọma. Nke a bụ otu usoro na Enyere ikike bụ ọrụ.
Enyere ikike na-enyere ndị ahịa aka na ndị ahịa ụlọ ọrụ ka ha nwee ntụkwasị obi ọdịnaya achọpụtala mgbe edere ha na saịtị ndị ọzọ. Ha na-enye dashboard n'efu iji chọọ ma chọta ọdịnaya ahụ, kwalite ya site na ọwa nke ha, ma ọ bụ kwụọ ụgwọ iji kwalite ya site na ọwa ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi.
Izu gara aga, agwara m CEO, Peyman Nilforoush, banyere mgbanwe a, obi dịkwa ha ezigbo ụtọ.
Ọtụtụ ahịa ahịa ndị na-ere ahịa na-arịọ ụlọ ọrụ ka ha bido ịkwụ ụgwọ n'ihu, tupu ụlọ ọrụ ahụ amata mmetụta ọrụ a ga-enwe na metrics azụmahịa. Na inPowered, anyị na-ewebata ụzọ dị iche iche dị iche iche ebe onye ọ bụla nwere ike iji ihe nchọta anyị nwere na ntanetị na nchịkọta okwu wee hụ ezigbo nsonaazụ, mgbe ahụ ha nwere ike ịkwalite ọrụ mmụba ụgwọ akwụ ụgwọ, ọ bụrụ na ha ahọrọ, maka mmetụta ka ukwuu. Ingchọta ihe dị mma, ozi a na-ekwenye ekwenye na isiokwu ndị ahịa gị nwere mmasị ekwesịghị ịbụ ihe ị ga-akwụ ụgwọ maka - nke ahụ bụ ihe onye ọ bụla nwere ikike dị mkpa. Taa, anyị na-eme ka mmadụ niile nwee ike inweta ya.
Enwere uzo abuo nke uzo a
Nmeputa efu - Nchọpụta ọdịnaya nke inPowered na ikpo okwu na-enyere ndị na-ere ahịa, ndị ọkachamara PR na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi aka ịchọ ụdị, ngwaahịa ma ọ bụ isiokwu wee chọpụta ma kesaa ọdịnaya tụkwasịrị obi nye ndị na-akwado ha na ndị na-eso ụzọ na Facebook, Twitter na LinkedIn.
Nkwụ ụgwọ ụgwọ - inPowered na-achọpụta edemede ndị emetụtara banyere akara, wee nyere ndị ahịa aka ịkwụ ụgwọ iji kwalite ọdịnaya ahụ tụkwasịrị obi dị ka mgbasa ozi sitere na mgbasa ozi ezubere iche nke inPowered. Nke a na-enyere ụdị aka ịkụziri ma dozie nghọta ndị ahịa na ọdịnaya ejiri ntụkwasị obi na-emetụta nke ọma karịa mgbasa ozi ejiri mara.
Tags: mgbasa ozimgbasa ozi ọdịnayaFacebookikeinpwrdLinkedInmgbasa mgbasa ozi mgbasa oziihe nke atotụkwasịrị obi ọdịnayaTwitter